Rose - 19 kumbiyuutarada.
Strawberries (Strawberries) - 29 kumbiyuutar.
Ubaxyo ubaxyo cusub Soo galaya qolkayaga salon, waxaad isla markaaba geli doontaa jawiga quruxda iyo udugga ubaxyada cusub ee la jaray. Ubaxyo loogu talagalay bouquet ama halabuur ayaa si shaqsi ah loogu xushay booqde kasta. Bouquets ka Harmony had iyo jeer waxay leeyihiin caraf udgoon cajiib ah, iyagu waa mid u gaar ah! Bouquet, oo laga soo tarjumay Faransiis, waa "farabadan ubaxyo lagu xiray xarig." Ubaxleyaasha Harmony - salonkeenu wuxuu geliyay naftooda abuurista halabuur ama bouquet. Midabku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa abuurista bouquet isku habboon. Bouquet waa sawir kaladuwan oo ubaxyo kala duwan ama ubaxyo isku nooc ah.
3562 ₽ Buugga Strawberry
Rose - 39 kumbiyuutarada.
Strawberries (Strawberries) - 25 kumbiyuutar.
Ubaxyo ubaxyo cusub ah, oo galaya qolkayaga salon, waxaad isla markaaba gelaysaa jawiga quruxda iyo udugga ubaxyada imika la jaray. booqde kasta, ubaxyo loogu talagalay bouquet ama halabuur ayaa loo xushay si gaar ah. bouquets ka wada noolaanshaha had iyo jeer waxay leeyihiin caraf udgoon, waa mid gaar ah! bouquet, oo laga soo tarjumay Faransiis, waa "farabadan ubaxyo lagu xiray xarig." ubaxleyaasha wada noolaanshaha - Dukaankeenu wuxuu naftooda u geliyay abuurista halabuur ama ubax. midabku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa abuurista bouquet isku habboon.
3899 ₽ Bouquet casiir leh
Strawberries (Strawberries) - 12 kumbiyuutar.
Geedka tufaaxa - 7 pcs.
Ruscus - 7 kumbiyuutar.
Bush wuu kacay - 5 pc.
Gelitaanka qolkayageena salon, waxaad isla markaaba gali doontaa jawiga quruxda iyo udugga ubaxa imika la jaray. Ubaxyo loogu talagalay bouquet ama halabuur ayaa si shaqsi ah loogu xushay booqde kasta. Bouquets ka Harmony had iyo jeer waxay leeyihiin caraf udgoon cajiib ah, iyagu waa mid u gaar ah! Bouquet, oo laga soo tarjumay Faransiis, waa "farabadan ubaxyo lagu xiray xarig." Ubaxleyaasha Harmony - salonkeenu wuxuu geliyay naftooda abuurista halabuur ama bouquet. Midabku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa abuurista bouquet isku habboon. Bouquet waa sawir kaladuwan oo ubaxyo kala duwan ama ubaxyo kala duwan ah.
4456 ₽ Bouquet macaan
Curinta waxaa lagu kabi karaa sida aad rabto. ubaxleyaal khibrad leh waxay awoodi doonaan inay abaabulaan bouquet u gaar ah, si xirfad leh u xushaan ubaxyo, walxaha qurxinta, xargaha hadiyadaha iyo baakadaha oo si fiican u dhammaystiraya guud ahaan halabuurka. Waad ku dari kartaa nacnac, kaararka, iyo alaabada carruurtu ku ciyaarto si ay ugu darsato dhadhan.
Strawberries (Strawberries) - 21 kumbiyuutar.
Bouquets-keena ayaa fasax kasta ka dhiga mid xusuus badan, dhalaalaya iyo midabbo badan. gabi ahaanba waa dhab oo waa nool yihiin, in kasta oo ay u muuqdaan uun abuur aad u wanaagsan. Boqoradda noocan oo kale ah ee ubaxa kama tagi doonto qofna dan la'aan, sababtoo ah sida aan caadiga ahayn waa in la helo ubax leh midab aan caadi ahayn hadiyad ahaan. bouquet iyaga ka mid ah waxay ku habboonaan doonaan ciid wanaagsan, dabaaldeg aroos, ama si fudud loogu farxo qof aad jeceshahay. xitaa aqoonyahanada quruxda badan ee quruxda badani ma caawin karaan dhoola cadeynta.
Haweeney da ’kasta ha noqotee waxay jeclaan doontaa bouquet-kan. Ubax casaanka ayaa had iyo jeer khuseeya, ha noqoto dhalasho, sanad-guurad, kulan ganacsi, taariikh jacayl, ama amaan aan sabab lahayn. Ubaxyada ugu casrisan waxaa lagu qurxiyay bouquet waxaana lagu kabi doonaa xargaha satin, taas oo siinaysa bouquet muuqaal muuqaal ah oo casri ah. Nooca ubaxyada ayaa inyar ka duwanaan kara sawirka websaydhka iyadoo kuxiran xilliga.
14680 ₽ Bouquet of 101 soobaxyo guduudan
Qaab dhismeedka: Casaan cas - 55 kumbiyuutar. Xirxirida: cajalad Ku dhowaad haweeney kasta ayaa jeclaan doonta bouquet-kan. Ubaxyada ugu casrisan waxaa kaabaya ribbada loo yaqaan 'satin ribbon', taas oo ku siinaysa bouquet muuqaal muuqaal ah oo casri ah. Nooca ubaxyada ayaa inyar ka duwanaan kara sawirka websaydhka iyadoo kuxiran xilliga.
8850 ₽ Terrace habeenkii
Casaan qurux badan oo casaan ah ayaa ubax ka kacay. Qaab dhismeedka: Casaan kacay - 51 kumbiyuutar. Xirxirida: cajalad Ku dhowaad haweeney kasta ayaa jeclaan doonta bouquet-kan. Ubax casaanka ayaa had iyo jeer khuseeya, ha noqoto dhalasho, sanad-guurad, kulan ganacsi, taariikh jacayl, ama amaan aan sabab lahayn. Ubaxyada ugu casrisan waxaa kaabaya ribbada loo yaqaan 'satin ribbon', taas oo ku siinaysa bouquet muuqaal muuqaal ah oo casri ah. Nooca ubax ayaa inyar ka duwanaan kara sawirka goobta kuxiran iyadoo kuxiran xiliga.
7770 ₽ Bouquet of 51 soobaxyo guduudan
Ubax cad, casaan - 31 kumbiyuutar. Xirxirida: cajalad Nooca ubax ayaa inyar ka duwanaan kara sawirka goobta kuxiran iyadoo kuxiran xiliga.
5430 ₽ Bouquet of 31 ubax cad iyo casaan
7090 ₽ Warqad jacayl
Bouquet caadiga ah ee soobaxyada cas. Qaab dhismeedka: Casaan kacay - 31 kumbiyuutar. Xirxirida: cajalad Haweeney da ’kasta ha noqotee waxay jeclaan doontaa bouquet-kan. Ubax casaanka ayaa had iyo jeer khuseeya, ha noqoto dhalasho, sanad-guurad, kulan ganacsi, taariikh jacayl, ama amaan aan sabab lahayn. Ubaxyada ugu casrisan waxaa lagu qurxiyay bouquet waxaana lagu kabi doonaa xargaha satin, taas oo siinaysa bouquet muuqaal muuqaal ah oo casri ah. Nooca ubax ayaa inyar ka duwanaan kara sawirka goobta kuxiran iyadoo kuxiran xiliga.
5230 ₽ Xamaasadda Isbaanishka
Haweeney da ’kasta ha noqotee waxay jeclaan doontaa bouquet-kan. Ubax cad had iyo jeer waa khuseeya, ha ahaato dhalasho, sanad-guurad, kulan ganacsi, taariikh jacayl, ama amaan aan sabab lahayn. Ubaxyada ugu casrisan waxaa lagu qurxiyay bouquet waxaana lagu kabi doonaa xargaha satin, taas oo siinaysa bouquet muuqaal muuqaal ah oo casri ah. Nooca ubaxyada ayaa inyar ka duwanaan kara sawirka websaydhka iyadoo kuxiran xilliga.
5230 ₽ Saqbadh xiddigle
30830 ₽ 51 kacay Juliet
15750 ₽ 25 ubaxyo Juliet
30320 ₽ 51 ubax Cad Ohara
15500 ₽ 25 ubax White Ohara
9800 ₽ 15 ubax White Ohara
29300 ₽ 51 ubax Misty Xubbooyinka
20500 ₽ 35 ubax Misty xumbo
15000 ₽ 25 ubax Misty xumbo
9700 ₽ 15 ubax Misty xumbo
66900 ₽ 101 mitir casaan ayaa kacay
34400 ₽ Bouquet of 51-aadan-guduudan cas